Fanehoam-pitiavana ny teny Portigey amin’ny endriny isan-karazany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2011 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, bahasa Indonesia, Aymara, 繁體中文, 简体中文, Esperanto , Italiano, Português
Lazaina mazàna fa hoe “tenindray” na “tenindrenin'” izao tontolo izao ny teny Portigey, izay ampiasain'ny olona 200 tapitrisa mahery maneran-tany. Tamin'ny 21 Febroary isika no nankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny, nokarakarain'ny UNESCO nanomboka tamin'ny taona 1999. Eo am-pijerena ny fiteny Portigey amin'ny endriny ara-pitenenana sy ara-kolotsaina maro isan-karazany, dia manasa anao izahay ato amin'ity lahatsoratra ity ny hijery azy miaraka amin'ny fandinihana avy amin'ny mpitoraka bilaogy mampiasa ny teny Portigey, izay notsoahin'izy ireo tao amin'ny vaky boky tantara voalohany izay natokana ho an'ny teny Portigey [pt], Milagrário Pessoal – asasoratra vao navoakan'ny mpanoratra Angoley José Eduardo Agualusa.
Notsoahina avy ao amin'ny bilaogy Mértola ny lohatenin'ity lahatsoratra ity izay ahitana an'i Carlos Viegas milaza fa ny boky Milagrário Pessoal dia:
fanehoam-pitiavana ho an'ny teny Portigey, amin'ny endriny maro samihafa rehetra (…), fitsangatsanganana mitety ny tantaran'ny tenintsika, mamakivaky ireo toerana sy kolotsaina izay mamelona ka mahatonga azy hanankarena.
Sary: Manu Magalhães. CC BY-NC-SA 2.0
Tenim-pirenena ofisialy ampiasaina amina firenena valo ny teny Portigey – Angola, Brezila, Cap vert, Gine-Bisao, Mozambika, Portugal, São Tomé sy Príncipe ary Timor Atsinanana – izay eo amin'ny kaontinanta efatra – Afrika, Amerika, Azia ary Eoropa. Noho izany, mandrakotra toerana malalaka sy maro eto ambonin'ny tany ity teny iray ity (7.2% n'ny planeta [pt]), ary ahitana karazana fiainana maro hafa mihitsy itarafana ireo tenim-paritra samihafa ao amin'izy ireo. Izy ihany koa no teny fahadimy be mpampiasa indrindra eto amin'ny aterineto, raha ny fahitan'ny Mpikirakira ny antontan'isa maneran-tany amin'ny aterineto (Internet World Stats) azy, miaraka amin'ny mpampiasa aterineto miisa 82.5 tapitrisa any ho any. Narary i José Saramago tamin'ny volana Jona 2010, – ilay mpanoratra tokana amin'ny teny Portigey nahazo ny Loka Nobel ho an'ny haisoratra – ary nilaza izy fa “tsy misy teny Portigey, fa angamba kokoa aza teny maro amin'ny Portigey ” [pt]. Milaza ny mpanoratra Agualusa, ao amin'ny resaka nifanaovany [pt] amin'ny bilaogy Porta-Livros, fa :
Fitambaran'ny olona rehetra mampiasa ity teny ity ny teny Portigey ary izany no mahatonga ity teny ity ho mahaliana, mihaja tsara, izy afa-miitatra tsara endrika.
Ny bokintantara – na “andrana mikasika ny teny Portigey namboarina ho bokintantara”, hoy ny mpanao gazety Pedro Mexia mamaritra izany ao amin'ny tsikera mitondra ny lohateny hoe Politikan'ny teny [pt] – no milaza tantaram-pitiavana iray sady mandalina ny fandrafetana ny teny Portigey. Milaza koa i Agualusa, eo amin'ny resaka nifanaovany voalaza tetsy ambony, mikasika ny ” haben'ny alahelony amin'ny tsy fahitana intsony ny teny mahafinaritra sasany noho ny tsy fampiasana azy intsony” ary ny adidy hiaro ireo teny ireo tsy ho tratran'ny fahafatesana.
Tononkalo nosoratan'i Fernando Pessoa: Ny olona izay tsy afaka mahalala tsara ny teny, dia tsy ho afaka ahalala tsara ny fanahy mihitsy ihany koa. Sary: Lu Freitas eo amin'ny Flickr. CC BY-NC-SA 2.0
Manazava [pt] i Rui Azeredo, avy ao amin'ny bilaogy Porta-Livros, fa ny tantaram- “[pitiavana] eto dia endriny ivelany fotsiny hoan'ny mpanoratra mba hanomezam-boninahitra ny teny Portigey”:
Amin'ny alalan'ny fikarohana ny teny vaovao amin'ny alalan'ireo mpilalao fototra, ary kajiana mihitsy ny hanatsofohana ireo teny vaovao, tahaka ny lesona tsy voamaritsika akory, ao anaty tantara (…) nefa ahafahantsika mianatra ny zavatra rehetra izany. Avy any Portiogaly ka hatrany Angola, mandalo any Brezila sy firenena hafa, mitety ireo lalaonteny ireo ny masontsika (sady vaovao no taloha, miankina amin'ny fotoana eo amin'ny toerana ara-zeografia) nalefan'i Agualusa tamim-pahaiza-mandrindra .
Ao amin'ny fehintenin’ [pt]i Milagrário Pessoal, Bruno Vieira Amaral, avy any amin'ny bilaogy Circo da Lama, dia mihevitra izy fa “manana fahefana ny teny, ary fahefana ny teny “. Mitsikera amina teny fohy ao amin'ny Milagrário Pessoal anaty farango sosona i Amaral milaza fa feno hatsarana ny teny noho izy mahasolo tena ny firenena izay mampiasa azy – ary anatin'izany ny teny portigey dia mivoy fanao politika mikombona, manasaritaka ary nasionalista :
Fahefana ihany koa ny teny, politika amin'ny ankapobeny. Azo itarafana ny tsy fanekena izy, toy ny trangan'ny Timoriana izay nitanisa ny tonokalo avy any Camões. AZO itarafana ny fanambarana nasionalista izy, araka ny hita any amin'ny manampahaizana Breziliana izay nampiasa ny solon'anarana avy amin'ny teny Tupi. Mety itarafana ny fanasaritahana ihany koa izy ireo, toy ny olona zanahina izay mitady hanjanaka ny tenin'ny mpanjanaka mba hifehezana azy.
Manohana ity fomba fijery ity i José Leitão, ao amin'ny bilaogy Inclusão e Cidadania, [pt]:
Ahitana fanoroana maro mikasika ny politika eo amin'ny teny ny tantara, izay mendrika hojeren'ny mpikaroka ara-tsosialy, ny mpandinika ny teny ary ireo tompon'andraikitra politika miandraikitra ny teny Portigey.
Tonokalo nosoratan'i Manuel Bandeira: Tsy tonga tamiko tamin'ny alalan'ny gazety na boky ny fiainana /tonga tamiko izy avy amin'ny vavan'ny olona tamin'ny fomba fiteny tsy marin'ny olony/ fomba fiteny marin'ny olona/satria ny olona no mamiratra rehefa miteny Portigen'ny Brezila/Raha mandritra izany/ny zavatra mba ataontsika/dia fihetsika fotsiny/mikasika ny rafiteny portigey.Sary avy amin'i Capitu eo amin'ny Flickr. CC BY-NC-SA 2.0."
Miompana amin'ny endrika mampiady hevitra matetika ny eritreritry ny mpamaky ny Milagrário Pessoal momba ny Fanavaozana ny tsipelin’ ny teny Portigey, izay mitady hanambatra sy hampiara-mirona ny tsipelina ampiasaina any amin'ny firenena mpiteny portigey tsirairay. Ao amin'ny resaka ifanaovany amin'ny bilaogy Porta-Livros, no milaza i Agualusa:
Mbola tsy nisy mihitsy hatrizay taha ambonina fivezivezen'ny mponina sy hevitra sahala amin'izao teo amin'ny firenena miteny Portigey . (…) Ary midika izany fa mahatonga ny olona hifanatona kokoa ny teny.
Manamarika [pt] sombinteny ao amin'ny boky i Pedro Teixeira Neves, avy ao amin'ny PNETLiteratura, ary manontany hoe :
“Nanoratra i Moisés da Conceição fa ny teny Portigey, teny Afrikana any amin'ny fotony da tahaka ny vokatry ny fifampikasokasoana nandritra ny fotoana maharitra tamin'ny teny arabo izay maro ny teny manamarika azy, dia mbola mila fanakonana kokoa, volavolaina araka ny toerana misy azy amin'ny firenena be mpiteny portigey. Ny lahatra ho antsika dia isika mifampitelina…”. Raha fehezina dia io no petra-kevitra miafina ao anatin'ny faritra famoronana amin'ny bokintantara. Tsikera miafina ao ambadiky ny fivoaran'ny tsipelina? Nahoana moa no tsy vakiana isan'andalana amin'izany fomba izany??…
Noho ny tsy nahazoana valiny an'ity fanontaniana ity, dia milaza i Teixeira Neves fa “harena ny teny ” [pt] ary hoy izy mamarana :
Harena mipirina tsy ao anaty vata mihidy amin'ny olona mampiasa azy (izany hoe, ireo olona izay miteny azy, ny Portigey), fa harena izay ny fahasamihafany eo amin'ny lafiny jeografia sy ny fivelarany tsy an-kijanona dia nanjary nanankarena kokoa sy niitatra kokoa. Amin'ny teny fohy: manana famantarana maro ny teny, ary izay tranga izay ihany no maneho ny tombony, fa tsy ho fatiantoka mihitsy. Toy ny elastika ny teny, toy ny vatan'olona izay veloma mitady sakafo hatrany . Fitsangatsanganana mitohy foana ny teny, mitety ny ranomasimbe tsy hita mihitsy na tsy mbola nodiavina hatrizay.
Tonokalo nosoratan'i Antonio Risério: “ny teny no fitaovana tena ampiasaintsika. Ny teny ho toy ny feo, dika, enti-miasa, ny teny fanalahidy, mpanondro ara-kolotsaina, mpampiraikitra ara-kolotsaina, toy ny tantara, toy ny zavatra, toy ny vondrona iray miova sy azo ovaina
Nandray anjara tamin'ny fanatontosana ity lahatsoratra ity i Paula Góes. Ny sary rehetra dia nalaina avy amin'ny Tranom-bakoky ny teny Portigey , any São Paulo, Brezila.